January 2012 ~ လူဗိုလ် ဟူသည် ...
by Yangon Press International on Thursday, 26 January 2012 at 19:16
ဇန်န၀ါရီ ၂၆၊ ၂၀၁၂ (YPI) ပဲခူးသွန် ရေးသားသည်
ရှမ်းမလေးက “ဘာဖြစ်လို့ အမေကို အမေလို့ မခေါ်တာလဲ” ဆိုတဲ့ သူ့အဒေါ်အမေးကို နှုတ်ခမ်းတစူစူပြန်ဖြေရင်း အိမ်ပေါ်တက်သွားတယ်။
“အ်ိမ်မှာသူ့အမေက နေ့လယ်ကျောင်းလွှတ်ချိန် ထမင်းစားဖို့ စောင့် နေတာ။ သူကတော့ဒီအိမ်မှာလာစားတယ် သူ့ အမေအိမ်သွားစားပါလို့ ဘယ်လိုပဲပြောပြောမရဘူး ဒီအိမ်ပဲကပ်တာ ” လို့ ရှမ်းမလေး အဒေါ်က ရယ်သံစွက်ပြီး ပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်။
နှစ်အိမ် သုံးအိမ်သာခြားတဲ့ အကွာအဝေးဆိုပေမဲ့ ရှမ်းမလေးကတော့ သူ့အမေအိမ်ကို ဘယ်တော့မှ ထမင်းစားပြန်လေ့မရှိပါဘူး။
အများအားဖြင့် ရှမ်းမလေးဟာ သူ့ရဲ့အမေဖြစ်သူ တိုက်အိမ်ထက် အဒေါ်နဲ့ အဖွားတွေနေတဲ့ ပျဉ်းထောင်အိမ်လေး မှာသာ ကပ်နေလေ့ရှိပါတယ်။
ရှမ်းမလေးဟာ ငယ်စဉ်ကတည်းက အဖိုးအဖွားတွေနဲ့ ကြီးခဲ့ရပါတယ်။ အခုတော့ မိဘတွေထိုင်းနိုင်ငံမှ ပြန်လာပြီး အတူတူပြန်နေပေမယ့်လည်း သူ့ကတော့ မိဘတွေနဲ့ သူစိမ်းဆန်ဆန်ဖြစ်နေတုန်းပါ။
Author: lubo601 | 6:57 AM | No မှတ်ချက် |
by Soe Min on Tuesday, January 31, 2012 at 9:41am
လေပွေနှောက်ခိုက် စိုက်စိုက်ပါသွားတဲ့ သစ်ရွက်ကြွေဆိုတာ လေဟုန်စီးလာတဲ့ ငှက်ကလေးတွေနဲ့တွေ့ပြီး ရောယောင်ပျော်ပါးလို့ရလှ တခဏပါပဲ။ အချိန်တန်တော့ ကိုယ့်နေရာကိုယ် ပြန်လဲလျောင်းရစမမြဲ မဟုတ်လား။ ဆရာခမ်းလိတ်ရဲ့ သီချင်းတွေနဲ့ချည့် လုပ်စားနေသလို ဖြစ်နေမှာစိုးလို့ စာသားလေးတော့ ပြန်မတင်တော့ပါဘူး။ လက်ရှိကိုယ့်အဖြစ်နဲ့ တိုက်ဆိုင်နေလို့ ခံစားကြည့်တာပါ။ သူများရပ်ရွာမှာ နတ်မကလည်း ကျီးကတော့ မောခဲ့တာအမှန်။ ငှက်ကလေးတွေ ပျံတာ အားကျသော်ငြား က်ုယ့်ဘ၀နဲ့ကိုယ် အိပ်မက်က နိုးထရပြန်သပေါ့လေ။ အိမ်မှာကျန်ခဲ့တဲ့ ဖတ်သီဖတ်သီ လူနာကလေးတွေကို တွေးမိတော့ အလည်မလွန်မိသော်ငြား “အားနာလိုက်တာ အချစ်ရယ်..” ဆို အတင်းတွန်းပြီး ပြန်ချင်စိတ်တွေ ပေါက်လာပါပြီ။
‘ငါဟာ ငါ့တပည့်တွေရဲ့ ရဲဘော်တွေကို သွန်သင်သလို ငါကိုယ်တိုင်လည်းလိုက်နာတယ် ဆိုတာ မှတ်ထားပါ’
Author: lubo601 | 5:57 AM | No မှတ်ချက် |
by Myat Thi Ha on Tuesday, January 31, 2012 at 8:28pm
ထိုအချိန်မြန်မာနိုင်ငံသည်လွတ်လပ်ရေးမရသေး။ဗြိတိသျှဘုရင်ခံအုပ်ချုပ်နေဆဲပင်ဖြစ်ရာ အစိုးရအဖွဲ့ (ဝန်ကြီးအဖွဲ့ Cabernet)ကို ဘုရင်ခံ၏ အမှုဆောင်ကောင်စီဟု ခေါ်သည်။သဘာပတိက ဘုရင်ခံဖြစ်ပြီး ဗိုလ်ချုပ်က ဒုတိယသဘာပတိ အမည်ဖြင့် ဝန်ကြီးအဖွဲ့ကိုဦးစီးကွပ်ကဲရသည်။ သို့ရာတွင် ဘုရင်ခံမှာ အမည်ခံ ‘သဘာပတိ’ သာဖြစ်ပြီး နိုင်ငံခြားရေး၊ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနများကိုပါ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကပင်ကွပ်ကဲရသည်။
Author: lubo601 | 5:29 AM | No မှတ်ချက် |
by Lu Cifer on Friday, January 27, 2012 at 10:10pm
သိပ္ပံ နဲ့ နည်းပညာ
ဓာတ်ပုံ Khin Maung Win AP
မြန်မာ့လက်ရာတွေဟာ အာရှဒေသမှာ အိန္ဒိယ ဟိန္ဒူ နွယ် ယဉ်ကျေးမှု လက်ရာအဖြစ်နဲ့ သတ်မှတ်ထားသလို အနုပညာနဲ့ ပိသုကာ ပညာမှာ ဆင်ဆင်တူပေမယ့် ထူးခြားတဲ့ နည်းစံနစ်မျိုးကို သုံးထားတာ တွေ့ရတယ်လို့ ဗိသုကာ ပညာရှင် ဒေါက်တာကျော်လတ်က ပြောပါတယ်။
by ရင်နင့်အောင် on Tuesday, January 31, 2012 at 4:04pm
သံသယကို မိုးရေရောထားတဲ့ မြို့ပြကြီးက အက်ဆစ်တွေ
တစ်ခွက်ပြီးရင်း နောက်တစ်ခွက်နဲ့ လမ်းတွေက ပိုပိုကျယ်လာတယ်
ရင်ခုန်သံမှတ်တမ်းမှာ သွေးနဲ့ယက်တဲ့ ဖျင်ထည်တွေ စုတ်ပြဲလို့
ဆောင်းတွင်းတိုင်းမှာ သွေးနွေးသတ္တ၀ါတွေ ချမ်းရစ်ခဲ့ပြီ
တိုက်တွေ မြင့်မြင့်လာတဲ့ မြို့ပြကြီး.. တိုက်တွေ ပြိုပြိုကျတဲ့ မြို့ပြကြီး
ကားတွေ များများလာပြီး.. လမ်းတွေ ပိတ်ပိတ်လာတဲ့ မြို့ပြကြီး
လူကြီးဝမ်းစာ မပြည့်တဲ့ ကလေးတွေနဲ့ ကလေးဝမ်းစာ မပြည့်တဲ့ လူကြီးတွေ
Author: lubo601 | 4:18 AM | No မှတ်ချက် |
ကျွန်တော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများသည် နှစ်ပေါင်းကြာရှည် ပြည်သူ့နီတိ မသိသော၊ ကိုယ်ကျင့် တရားဆိုတာ ဘာမှန်းမသိသော၊ လူ့အခွင့်အရေး ဟူသည်ကို လုံးဝနားမလည်တာလား၊ နားမလည်ချင် ယောင်ဆောင်တာလား အသေအချာ မပြောတတ်သော ၊ သူတော်ကောင်းလိုလို ၊ သူယုတ်မာလိုလို ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးငယ်များ၏ အုပ်ချုပ်မူ အောက်တွင် ယုန်သူငယ်လေးများအဖြစ် နေခဲ့ရသည်မှာ ယခုဆိုလျှင် ယုန်ကြီးများပင် ဖြစ်ကုန်ကြပါပြီ။
Author: lubo601 | 3:34 AM | No မှတ်ချက် |
by သက်တန့်ချို on Monday, January 30, 2012 at 3:41pm
၂၁ ရာစုခေတ်ကြီးမှာ ရောဂါတွေကလည်း အသစ်အဆန်းတွေ တစ်ခုပြီးတစ်ခု ပေါ်ထွက်လို့လာနေပါတယ် ။ အထူး သဖြင့် အမျိုးသမီးတွေဟာ ခန္ဓာကိုယ်ဖွဲ့စည်းပုံအရ ရော ဟော်မုန်းတွေနဲ့ သွေးသား အ ရရော ယောင်္ကျားလေးတွေထက် ဖြစ်နိုင်တဲ့ရောဂါတွေ ပိုများပါတယ် ။ အခုတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ အမျိုးသ မီးတိုင်းသိသင့်တဲ့ နေရာ လွှဲမှား သားအိမ်အတွင်းသား ဆိုတဲ့ Endometriosis ဆိုတဲ့ရော ဂါအကြောင်း ဖြစ်ပါတယ် ။ ဟိုးယခင်တုန်းကဆိုရင် ရောဂါတစ်ခု ကိုနာမည်တပ်နိုင်ဖို့ ခက်ခဲစွာ စမ်းသပ်ခဲ့ကြရတယ် ။
Author: lubo601 | 3:29 AM | No မှတ်ချက် |
by San Yu on Tuesday, January 31, 2012 at 4:21pm
ပညာတွေတဖြည်းဖြည်းခြင်းဝင်လာမှာအသေအချာပါ။တဆက်တည်းကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံလည်း. Stable stage ကို အမြန်ရောက်လာမည်မှာမလွဲ။( စာကြွင်း. -Stable stage. ကိုရောက်ဖို့ ဆို. FDI. များများ ရတဲ့နည်းဘဲရှိတယ်ထင်မိပါသည်)
ပြောရင်း ဘေးရောက် ရောက်သွားတယ် အဲလိုတိုးတက်လာတဲ့အခြေအနေမှာဆို. ကျွန်တော်တို့ University တွေကဆရာ။ဆရာမတွေ ကိုအင်ဂလိပ်. လို စာကို. အင်ဂလိပ်. လို ပြန်သင်ရရင်ဘယ်လိုဘာသာပြန်မလဲစဉ်းစားနေမိတယ်။ ဘယ်သူကိုမှအပြစ်ပြောဆော်ကား လိုရင်းမဟုတ်ပါ။ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်. ဆရာအဖြစ်ရန်ကုန်စီးပွားရေးတကသိုလ်မှာ ၅နှစ်နီးပါးတာဝန်ထမ်းဆောင်ဖူးခဲ့ပါသည်။
ဘယ်ဘက်အခြမ်းက ဆွဲအားဟာ သိပ်ကိုကြောက်ဖို့ကောင်းတယ် ကိုသံခဲ ။
by Yeyint Kyaw on Monday, January 30, 2012 at 7:51pm
အစားထိုးထားတဲ့ တစ်ဖက်ကမ်းမှာ ကျွန်မဟာ ဗီလိန်၊
ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ ပျော်ရွှင်နေကြတဲ့ လူတစ်စုကြားမှာ
ဒီလိုနဲ့ ကျည်တစ်တောင့်ကို ပထမဦးဆုံးဝါးမြိုမိသွားတယ်။
မွေးဖွားတာတွေဟာ ဘာတစ်ခုမှ အသုံးမ၀င်ဘူး၊ပက်ပက်စက်စက်
Author: lubo601 | 1:52 AM | No မှတ်ချက် |
by Soe Min on Monday, January 30, 2012 at 9:32am
ကလေးတွေ မူကြိုကျောင်းပို့လို့ ၀လုံးရေးဖို့ ညီလေးထိုင်ဆိုတဲ့ အရွယ်ရောက်ရင် ကိုယ်တွေခေတ်တုန်းကတော့ ဆရာကြီးမင်းသုဝဏ်တို့ ဆရာပျဉ်းမနားမောင်နီသင်းတို့ ကဗျာလေးတွေနဲ့ ကြီးပြင်းခဲ့ကြရပါတယ်။ ခုခေတ်ကလေးတွေကတော့ ဆွမ်းအုပ်နီနီ အမေရွက်တာ ငါတို့ကျောင်းတက်တာနဲ့ ဘာဆိုင်လို့လဲ လို့ နားလည်ကြမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ မနီကလေး ဘယ်ကိုသွားလို့ စာသင်ကျောင်းက ဘာတွေ သင်ဆိုတာကိုလည်း မဆိုတတ်ကြတော့ပါဘူး။
ခေတ်ကိုပြင်မယ့် အင်ဂျင်နီယာ [ သွန်းနေစိုး ]
Author: lubo601 | 1:39 AM | No မှတ်ချက် |
by Thorn Nay Soe on Saturday, January 28, 2012 at 6:05pm
အင်ဂျင်နီယာတွေလုပ်မယ့် စာစောင်အတွက် ရေးပေးပါလို့ အမှာရှိလာပါတယ်။
အင်ဂျင်နီယာပညာနှင့် ကျနော်ကား အတော်ဝေးပါသည်။ ဒီတော့ ...
ကျနော် ဘာရေးရမည်နည်း? စဉ်းစားသည့်အခါ စိတ်ထဲ အကြောင်းအရာတစ်ခု ပေါ်လာခဲ့သည်။
ကိုယ်သိသော ပိုင်နိုင်သော အကြောင်းအရာကိုပဲ ကိုယ်ရေးတော့မည်။
သို့သော် အင်ဂျင်နီယာအားလုံး၏ အခြေခံစိတ်ဓာတ်ကို ကိုယ်စားပြုနိုင်လိမ့်မည်ဟု ယုံကြည်မိပါသည်။
အစက စပြောရပါလျှင် ကျနော့်မှာ ဦးလေးတစ်ယောက်ရှိခဲ့ဘူး၏။
ထိုဦးလေးကို ကျနော်က `အင်ဂျင်ပျက်´ ဟု စိတ်ဆိုးဒေါသထွက်သောအခါ ခေါ်ဝေါ်ခဲ့သည်။
ဂျွန်မက်ကိန်းရဲ့ ကျောက်ဆူးနဲ့ သံလိုက်အိမ်မြှောင်
Author: lubo601 | 1:27 AM | No မှတ်ချက် |
( ပါမောက္ခ၊ Monday, 30 January 2012 ၊ ဂျွန်မက်ကိန်း )
by Ko Thaung on Monday, January 30, 2012 at 3:40pm
ဂျွန် မက်ကိန်း (John McCain) ဟာ ၁၉၈၆ ခုနှစ်မှာ အမေရိကန် အထက်လွှတ်တော်အမတ်အဖြစ် အရွေးခံရပါတယ်။ ၂၀၀၈ ခုနှစ်မှာတော့ ရီပတ်ဘလေကန် ပါတီရဲ့ သမ္မတလောင်းအဖြစ်နဲ့ လက်ရှိ သမ္မတ အိုဘားမားနဲ့ ယှဉ်ပြိုင် ရွေးချယ်ခံခဲ့ပေမယ့် ရှုံးနိမ့်ခဲ့ပါတယ်။
ဒီ့အရင်ကတော့ အမေရိကန် ရေတပ်မှာ အမှုထမ်းခဲ့ပြီး၊ ကွန်ဂရက်အမတ်လည်း နှစ်ကြိမ် ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ဂျွန် မက်ကိန်းမှာ သားသမီး ခုနစ်ယောက်နဲ့ မြေး လေးယောက် ရှိပါတယ်။ ဇနီးသည် စင်ဒီနဲ့အတူ ဖီးနစ်မြို့လေး (Phoenix) မှာ နေထိုင်ကြပါတယ်။
by Yangon Press International on Sunday, January 29, 2012 at 9:36pm
The main aim of competition in bi-election to amend 2008 constitution
ထားဝယ်မြို့လယ် ဗိုလ်ချုပ်လမ်းပေါ်တွင် ကြိုဆိုသူ
လူအုပ်ကြီးအား နှုတ်ဆက်နေသည်ကိုတွေ့ရစဉ်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ပထမဆုံး ရွေးကောက်ပွဲ မဲဆွယ်ခရီးစဉ် အဖြစ် ထားဝယ် မြို့သို့ရောက်ရှိစဉ်အတွင်း ပြောကြားသည့် မိန့်ခွန်း ၌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ရွေးကောက်ပွဲဝင်သည့် အဓိကဦးတည်ချက် မှာ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအထဲမှ ပြည်သူများအကျိုးမဖြစ်စေသည့်အပိုင်းများအား ပြုပြင်ရန်
ဖတ်မိသော စာများ (ဇန် ၂၃-၂၇)
by Padauk Myay on Monday, January 30, 2012 at 2:27pm
(အရင်တုန်းကတော့ ပြည်တွင်းထုတ် ဂျာနယ်များ ထဲက ကောင်းနိုးရာရာ ဆောင်းပါးများကို ပြန်ရိုက်ပြီး တင်ခဲ့ပါတယ်။ အခုတော့ အပြောင်း အလဲတွေက မြန်လွန်းတော့ ဂျာနယ်တွေ ထဲက စိတ်ဝင်စားစရာလေး တစ်ခုတွေ့လို့ ကူးပြီး တင်မယ် လုပ်လိုက်၊ နောက်တစ်ခု တွေ့လိုက်နဲ့ မဆုံးတော့ပါဘူး။ ဒါ့ကြောင့် ဖတ်မိတဲ့ အထဲက ကောင်းနိုး ရာရာတွေကို အကျဉ်းချုပ်လေး ရေးမယ်၊ အပြည့်အစုံ တင်သင့်တာကို ရိုက်ပြီး တင်မယ်ဆိုပြီး အခုပုံစံ စမ်းပြီး လုပ်ကြည့်တာပါ။)
ဇန်န၀ါရီလ ၂၆ ရက်နဲ့မှာ ပြန်ပြီး ကျင်းပတဲ့ လွှတ်တော် အစည်းအဝေးကို သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်က သဝဏ်လွှာ တစ်စောင် ပေးပို့ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီ သ၀ဏ်လွှာမှာ အရေးကြီးတဲ့ အချက်တွေကို အခုလို တွေ့ပါတယ်။
လူတွေ ထဲက လူအချို့ (ရှာမှ ရှားတဲ့ ဖခင်)
by မြန်မာ့ အရေး on Friday, 27 January 2012 at 20:40
ဒီတခါတော့ ကျွန်တော် အားကျသော လူတစ်ယောက်အကြောင်းကို ပြောပြချင်ပါတယ်..။
သူ့ရဲ့လုပ်ကိုင်ပုံဟာ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာလူမျိုး မိဘအများစုရဲ့ လုပ်ကိုင်ပုံနဲ့ ခြားနားနေတဲ့အတွက် စာရှုသူထဲက မိဘတွေကတော့ သဘောတူချင်မှတူမှာပါ…။
မြန်မာမိဘ အများစုဟာ သားသမီးများထဲက ပြန်မပြောသူ ခိုင်းတိုင်းလုပ်သူကိုမှ လိမ္မာရေးခြားရှိသူအဖြစ် သတ်မှတ်သော်လည်း သူကတော့ မိဘကိုပင် ပြန်ခံပြောတတ်စေရန် စနစ်တကျ သင်ကြားပေးခြင်းပင်ဖြစ်ပါတယ်....။
သို့ပေမဲ့ မိဘက “ဒါ” ဆိုရင် သားသမီးက အကြောင်းမဲ့ မလိုက်နာတာမျိုး၊ ခပ်ရိုင်းရိုင်း စိတ်ဓာတ်မျိုးတွေနဲ့ ကလန်ကဆန် ပြုလုပ်တာမျိုးမဟုတ်ပဲ အကျိုးအကြောင်းသင့်စွာနဲ့ မလုပ်လိုကြောင်း မလုပ်သင့်ကြောင်းစတာတွေကို ယဉ်ကျေးစွာပြန်လည် ပြောဆိုတတ်စေရန် သင်ကြားပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်..။
ကွန်ပျူတာနဲ့ ပြတ်စဲလို့ ရပါ့မလား
“ သား မအိပ်သေးဘူးလား”
“အိပ်လို့မရသေးဘူး ဖေဖေ၊ သား ဆက်လုပ်ရဦးမယ်”
သားအလုပ်က ကွန်ပျူတာ ပရိုဂရမ်ရေးရတာ ဖြစ်တယ်၊ ကျွန်တော်က ကျွန်တော့်ကို ကျွန်တော် အတော်အလုပ် လုပ်ပြီလို့ ထင်သူဖြစ်တယ်။ သို့သော် သားက ကျွန်တော့်ထက် အချိန်အများကြီးယူကာ အလုပ်လုပ်ရတယ်။
သူ့ရဲ့လုပ်ငန်းသဘာဝကိုက အလုပ်တွေကို တာရှည်လုပ်ရတာပဲ။
သူတို့ကိုကြည့်ကာ ကျွန်တော် မောနေတယ်။
ယနေ့ သားက စင်ကာပူမှာ ကွန်ပျူတာပရိုဂရမ်မာ လုပ်နေပြီဖြစ်တယ်။ ကွန်ပျူတာခေတ်မှာ သူဘယ်လောက်ပင်ပန်းမလဲ၊ ဒါကြောင့် ဒီဆောင်းပါးကို ရေးဖြစ်တာပါပဲ။
Author: lubo601 | 10:06 PM | No မှတ်ချက် |
by cherrymyodaw on Monday, January 30, 2012 at 8:02am
နိုင်ငံခြားဧည့်သည်တွေ တစ်ယောက်ဝင်တစ်ယောက်ထွက် ၀င်လာမစဲ တဖွဲဖွဲဖြစ်နေတာကို
ကြည့်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံသားအားလုံး ၀မ်းသာအား ရဖြစ်ကြတယ်။ အထူးသဖြင့် နှစ်ပေါင်း
ငါးဆယ်ကျော်ခပ်စိမ်းစိမ်းနေခဲ့ကြတဲ့ အမေရိကန်၊ အင်္ဂလိပ်၊ ပြင်သစ်စ တဲ့ အနောက်နိုင်ငံတွေက
နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတွေကိုယ်တိုင် ရောက်လာကြတာကို ပိုပြီးသဘောတွေ့ကြတယ်။
ရောက်လာသမျှ ဧည့်သည်တိုင်းကလည်း အားတက်စရာစကားတွေ ပြောသွားကြတယ်။
စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေရုပ်သိမ်းဖို့ နီးစပ်လာပြီ၊ ကူညီထောက်ပံ့မှုတွေနဲ့ ချေးငွေတွေလည်း ပြန်ပေးမယ်။
မန်းသိရိဈေးမှဝယ်လာသော ဝက်သားသုံးထပ်သား လေးဆယ်ကျပ် သားပြည့် မပြည့် ပြန်၍ ချိန်လိုက်သည်။ နဲနဲ မှ အပိုအလိုမရှိစွာပင် ချိန်ခွင်ရှာမှာ ညီနေသည်။ ပြည့်တယ် ဖေဖေ ဟု အနားတွင် စောင့် ကြည့် နေသည့် ဖေဖေ့ ကို ပြောလိုက်သည်။ ဖေဖေ က ဈေးမှပြန်လာလျှင်ဝယ်လာသမျှကို အမြဲ ပင်ပြန်၍ ချိန်စေသည်.။ မပြည့်လျှင်လည်း ဈေးသည် ကိုပြန်ပြောရမှ ကျေနပ်တတ်သည်။ ယခုလည်း ကျမကိုယ်တိုင်ဈေးသွားဝယ်တာ ကို ပင် ပြန်ချိန်ဦးနော် သမီး ဆို၍ ဘုရားတပြီး ချိန်ရသည်။ ပြည့်လို့ တော်ပါသေးရဲ့ ဟု စိတ်ထည်းမှ ရေရွတ်လိုက်ပါသည်။ မဟုတ်လျှင် ဖေဖေ့ အလိုကျ ဈေးသည် ကိုပြန်သွားပြောရဦးမည်၊ ထိုသို့ပြောရမည် ကို ကျမလွန်စွာ ဝန်လေးမိပါသည်။ ထားလိုက်ပါ ဖေဖေရာ သူတို့ မရိုးသားကြ တာ ကို သူတို့ဖာသာခံ ကြပါစေဟု ကျမ ကပြောတတ်သည် ကိုလည်းဖေဖေ ကမကြိုက်ပါ။
တော်လှန်ရေးနယ်မြေတခု၏ အခန်းကျဉ်းလေးထဲတွင် ဦးလေးနှင့်ကျနော် မထင်မှတ်ဘဲ ဆုံတွေ့ခွင့်ရရှိခဲ့သည်။ ရှေးဘဝရေစက်လားတော့ မသိ။ သူ၏ သွန်သင်ဆုံးမသံများမှာ ယနေ့တိုင် အမှတ်ရနေဆဲ။ ခွန်အားများ ပြည့်ဝ နေဆဲဖြစ်သည်။ ဦးလေး၏ အရပ်အမောင်းက ၆ ပေနီးပါး၊ အသားညိုတုတ်တုတ်နှင့် အလွန်ခိုင်မာတောင့်တင်း လှသည်။ အသံဝဲဝဲနှင့်မို့ တိုင်းရင်းသားတဦးဆိုသည်ကိုတော့ ကျနော်ရိပ်မိလိုက်သည်။ ဦးလေးနှင့် စကားပြော ဆိုခွင့်မရသေး။ အခြေအနေတို့ကို စောင့်ကြည့်နေရသည်။
Posted by ဖြူလေး on January 27, 2012 at 10:33pm in ကျန်းမာရေးကဏ္ဍ
(ဗေဒ သုခုမ ဆောင်းပါး တပုဒ်မှ ကူးယူဖေါ်ပြပါသည်)
ငွေ့ရည်မှုန် တစ်စ၏ ဒဏ္ဍာရီ
by Zay Ya on Sunday, January 29, 2012 at 1:44pm
စိတ်ရှည်လက်ရှည် စောင့်ဆိုင်းတယ်။ ဘာ ကို စောင့်နေတာလဲ - ဘယ်အရာလဲ- ဘယ်လောက်ထိ စောင့်ရမှာလဲ စသဖြင့် - တကယ်စင်စစ် စောင့်ခြင်း သက်သက် မှာ အဲ့ဒီ မေးခွန်းတွေ မရှိပါဘူး။ စောင့်နေတာ ဟာ စောင့်နေတာ သက်သက်သာ ဖြစ်ပါတယ် ။ အဲ့ဒီ - to wait, to wait for nothing ကို ဇင်ရဲ့ အနှစ်ကျတဲ့ အရာတစ်ခု လို့ ညွှန်းဆိုလေ့ ရှိတယ်။
ပြင်သစ်သမ္မတ နီကိုလပ်စ် ဆာကိုဇီ က လာမယ့် သြဂုတ်လ က စလို့ ငွေကြေးလွှဲပြောင်းမှု မှန်သမျှ အပေါ် မှာ သုံည ဒဿမ တစ် ရာခိုင်နှုန်း အခွန် ကောက်ခံရေး စီစဉ်မယ့် အကြောင်း အတည်ပြု ပြောကြားလိုက်ပါပြီ။
ဒိုးဒိုးဒန့်ဒန့် ရောင်စုံစလိုက်မီးများ အောက်မှာ မြူးထူးပျော်ပါး နေကြသော လူတွေကို ငေးကြည့်ရင်း စိတ်တွေကျဉ်းကျပ်လွန်း နေပေမယ့် အောင်အောင်တစ်ယောက် သည်းခံပြီး နေနေရ၏။။ ပါတီပွဲကို လှမ်းကြည့်လိုက်တော့ရယ်မောပျော်ရွှင်ပြီးစကားတွေ ဖောင်ဖွဲ့အောင် ပြောဆိုနေတာ တွေ့လိုက်ရသည်။။
မြင်ကွင်းကိုသေသေချာချာ၊ စေ့စေ့စပ်စပ် ကြည့်လိုက်တော့ မိန်းကလေးတွေလက်ထဲမှာ ခွတ်လေးတွေ ကိုင်မြှောတ်ပြီး အရက်တွေ သောက်နေရတော့ ၊ အရှက်ကြီးလှပါသည်ဆိုသော မြန်မာမလေးတွေကို မချင့်မရဲ လှမ်းကြည့် လိုက်ရင်း အောင်အောင် စိတ်တွေက တစ်ခုခုကို အလိုမကျ ဖြစ်နေသည်။။
အင်္ဂလိပ်ကိုလိုနီတော်လှန်ရေး၊ ဖက်ဆစ်ဂျပန်တော်လှန်ရေး၊ အရင်းရှင်တော်လှန်ရေး၊ စစ်အာဏာရှင် တော်လှန်ရေး၊ ဒီမိုကရေစီ တော်လှန်ရေး၊ တော်လှန်ရေး တော်လှန်ရေး တော်လှန်ရေးပေါင်းများစွာကို မြန်မာလူထုတွေ ဆင်နွှဲခဲ့ကြရသည်၊ ဆင်နွှဲဆဲလည်းဖြစ်သည်။
တော်လှန်ရေးဆိုသည်မှာ မည်သည့်အခါမှာ ပြီးဆုံးမည်နည်း၊
ဖထီး ဖတ်မိတဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး ပဏာမ သဘောတူညီချက်များ
Published on Sunday, 29 January 2012 02:35
Written by ဖထီး (ကျောင်းဆရာ- ကော်သူလဲ)
ဖထီးက ကျောင်းဆရာ။ ကျောင်းဆရာ ဆိုတော့ တခုခုကို လေ့လာရင် သသေးစိတ် လေ့လာတတ်တဲ့ အကျင့်ရနေတယ်။ ကျောင်းသားတွေ တွက်ချက်တဲ့ သင်္ချာတို့၊ အင်္ဂလိပ်စာတို့ အမြဲစစ်နေရတော့ အမှားဆို ချက်ချင်း သိတဲ့အကျင့်ရလာတယ်။ ပုဒ်ထီးကို ဘယ်နေရာချရမယ်၊ ပုဒ်မကို ဘယ်နေရာ သုံးရမယ် စတာတွေက မူလတန်း ကျောင်းအုပ်ကြီး ဖထီးကျွမ်းကျင်တဲ့ အတတ်ပါဘဲ။ ဖထီး လုပ်သက် ၃၀ ကျောင်ရင်းပြီး ရလာတဲ့ မဟာအတတ်ပညာဘဲ။
ဖော်ပြပါ စာသားလေးမှာ ဆရာတော် တစ်ပါး၏ ဟောကြား ချက်မှ ဖြစ်ပါသည်။ နှစ်သက်လှ သဖြင့် ခေါင်းစဉ်ပြုကာ ရေးသားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်တော်တို့ ဘိုး၊ ဘွားလက် ထက်မှ ကျွန်တော်တို့ လက်ထက် တိုင် မြန်မာ့လူ့အဖွဲ့အစည်းတွင် ရှေး ရိုးဆန် အယူအဆ တစ်ရပ်ကို တွေ့ ရပါသည်။ ယင်းအယူအဆမှာ မိသားစု တစ်စုတွင် အဖေနှင့်အမေ ကသာ အိမ်ထောင်၏ စားဝတ်နေ ရေးအတွက် တာဝန် ယူလျက်ရှိပါ သည်။ အဖေနှင့်အမေကသာ တာဝန် သိပြီး တာဝန်ယူသော အလေ့အထ ဖြစ်ပါသည်။ ငွေရှာရသူက အဖေ၊ ချက်ပြုတ် ကျွေးမွေးသူက အမေဖြစ်ပါသည်။ သားသမီးများက အေးအေးဆေးဆေး နေနိုင်ကြပါသည်။ (နေလည်းနေကြ ပါသည်) အိမ်၏ အခက်အခဲ မှန် သမျှကို မိဘနှစ်ပါးက တာဝန်ယူ ဖြေရှင်းပေးလေ့ရှိပါသည်။ သားသမီး များကို အလွန်ချစ်သောစိတ်ဖြင့် သား သမီးတွေ စိတ်အားမငယ်ရအောင် ထားတတ်ကြပါသည်။
အာဖဂန် သမ္မတ ဟာမစ် ခါဇိုင်း
အာဖဂန်က ပြင်သစ်တပ်တွေ တနှစ်စော ရုပ်သိမ်းတော့မယ်
ပြင်သစ်နိုင်ငံဟာ အာဖဂန်နစ္စတန်မှာ ချထားတဲ့ သူတို့တပ်ဖွဲ့ဝင် သုံးထောင်ခြောက်ရာ ကိုပြန်ရုပ်သိမ်းမယ့် အစီအစဉ်ကို ပိုပြီး မြန်ဆန်အောင် ဆောင်ရွက်နေပါတယ်။
NATO မြောက်အတ္တလန်တိတ်စာချုပ်အဖွဲ့က ဦးဆောင်တဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုပြန်ရုပ်သိမ်းဖို့ သတ်မှတ်ထားတဲ့ အချိန်ထက်တနှစ်စောပြီး ၂၀၁၃ ခုနှစ်အကုန်မှာ ပြင်သစ်တပ်ဖွဲ့တွေ အားလုံးကို ပြန်ရုပ်သိမ်းမယ်လို့ ပြင်သစ် သမ္မတ Nicolas Sarkozy ကပြောပါတယ်။
၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ ဇန်န၀ါရီလ ၂၀ ရက်ထုတ် "The Washington Post" သတင်းစာမှာ မြန်မာနိုင်ငံသမ္မတ ဦးသိန်းစိန်နဲ့ တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်းကို ဖတ်လိုက်ရတယ်။ ထိုသတင်းစာနဲ့ တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်းမှာ သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်က မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဆင်းရဲမွဲတေမှုနှုန်း ၂၆%၊ ပြည်တွင်းအလုပ်လက်မဲ့ဦးရေနှုန်းထားဆိုးရွားမှုနှင့် မြန်မာနိုင်ငံသူ နိုင်ငံသား ၃ သန်းနီးပါး ပြည်ပထွက် အလုပ်လုပ်ကိုင်ကြရတာဟာ နှစ်ပေါင်း ၂၀ ကျော်ကြာ အနောက်နိုင်ငံမှ မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုကြောင့်လို့ ပြောဆိုသွားခဲ့ပါတယ်။ ယခုလို သမ္မတ၏ ပြောဆိုမှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကျနော့အတွေးထဲမှာ မေးခွန်းတချို့ထွက်ပေါ်လာပါတယ်။ ၁၉၈၈ ခုနှစ် လူထုအုံကြွမှုနောက်ပိုင်း စစ်အုပ်စုအာဏာသိမ်းပြီးချိန်မှ စတင်လျှင် ယနေ့အချိန်ထိ နှစ်ပေါင်း ၂၀ ကျော်ကာလအတွင်း မြန်မာနိုင်ငံဟာ လက်ရှိအခြေအနေတိုင် ဆင်းရဲတွင်း နက်သထက် နက်ခဲ့ရပြီး ချွတ်ခြုံကျခဲ့ရခြင်းဟာ လက်ရှိ မြန်မာနိုင်ငံ သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်သုံးသပ်သလိုပဲ Sanction နဲ့ တိုက်ရိုက်ပတ်သက်သလား။
by သက်တန့်ချို on Saturday, January 28, 2012 at 11:47am
ရွှေကို ဟိုးရှေးယခင်ကတည်းကစပြီး အလှအပ ပစ္စည်းတစ်ခုအဖြစ်သာမကပဲ အဖိုးတန် ရတနာတစ်ခုအဖြစ်ပါ လူတွေ ဟာ အစဉ်အဆက်သုံးစွဲခဲ့ကြပါတယ် ။ ရွှေဟာ အက်တမ်အမှတ်စဉ် ၇၉ ရှိပြီး သိပ်သည်းဆကတော့ 20'C မှာဆိုရင် 19.3 g.cm-3 ရှိပါတယ် ။ ရွှေရဲ့ အရည်ပျော်အမှတ် Melting point ဟာ 1062 °C ဖြစ်ပြီးတော့ Boiling point ကတော့ 2000 °C ဖြစ်ပါတယ် ။ ရွှေကို စတင် ရှာတွေတွေ့ရှိချိန် ကတော့ c.a 3000 BC ခန့် ကဖြစ်ပါတယ် ။
‘မြန်မာနိုင်ငံတွင် ကြံ့များ မျိုးသုဉ်းပျောက်ကွယ်’
by General Knowledge on Saturday, January 28, 2012 at 4:55pm
Posted on Jan 28 12 - 02:54 PM | Hits : 4
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ရှားပါးကြံ့မျိုးစိတ်များ မျိုးသုဉ်းပျောက်ကွယ်သွားပြီဟု တရားဝင်ထုတ်ပြန်ခြင်း မပြုသော်လည်း သဘာဝတောအတွင်း ရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်း မရှိတော့သည့်အတွက် မျိုးသုဉ်းသွားပြီဟု ပြောနိုင်ကြောင်း သစ်တောဦးစီးဌာန၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် သားငှက်တိရစ္ဆာန် ထိန်းသိမ်းရေးဌာနမှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ပြောကြားသည်။
၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသား ကိုကိုကြီးနှင့်တွေ့ဆုံခြင်း အပိုင်း ( ၂ )
by TheMessenger NewsJournal on Saturday, January 28, 2012 at 8:10pm
၈၈ မျိုးဆက်ရဲ့ ကြေညာချက်ထဲမှာ ဒီမိုကရေစီ ဖော်ဆောင်ရေး၊ ငြိမ်းချမ်းရေး၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အတွက် ပြုပြင်ရေးလမ်းကြောင်းပေါ်သို့ ဦးတည်ကြိုး ပမ်းရမယ့်အချိန်ဖြစ်တယ်လို့ ပြောထားတယ်။ ၈၈ အနေနဲ့ ဒါတွေဖြစ်လာအောင် ဘယ်လို ဏူညေ တွေ ချထားလဲ၊ အခုရော ဘာတွေလုပ်နေပြီလဲ။
အဓိက ကတော့ နိုင်ငံရေးဆိုတာ နိုင်ငံသားတွေ ဘယ်လောက်များများ ပါဝင်ဆောင်ရွက်သလဲဆိုတဲ့အ ပေါ်မှာ မူတည်ပြီး နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံရဲ့ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုက ဆုံးဖြတ်လို့ရပါတယ်။
‘ငါဟာ ငါ့တပည့်တွေရဲ့ ရဲဘော်တွေကို သွန်သင်သလို ငါကု...
ဘယ်ဘက်အခြမ်းက ဆွဲအားဟာ သိပ်ကိုကြောက်ဖို့ကောင်းတယ် ...
၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသား ကိုကိုကြီးနှင့်တွေ့ဆုံခြင်း ...
'' ငြိမ်းချမ်းရေးဆုတောင်း ''
‘ရင်သားအတုထည့် အမျိုးသမီးများအား ဗင်နီဇွဲလားအစိုးရ...
လရောင် ~ လေပြေ ~ ဆိုနာတာ
ဂျပန်မူလတန်းကျောင်းသို.့အလည်တခေါက်
အပြောင်းအလဲ များလှသော မြန်မာ့ပညာရေးစနစ်
Leukemia (လူကီးမီးယား) သွေးကင်ဆာနှင့်ပတ်သက်သည့် စု...
‘ရင်သွေးယူတော့မည့် မိခင်၊ ဖခင်လောင်းများ ဖတ်ရန်’
ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် ပညာရေး (အပိုင်း ၁) အယူအဆနှင့် ...
Silence or Noiselessness !
ဟာသလေး ကြိုက်လို့ သိမ်းလိုက်ပါတယ်....... ဟစ်ဟစ်
နင်က ငါနဲ့ရန်ဖြစ်ဖို့ဘုရားသခင်က လွတ်လိုက်တဲ့ လူ
ကျွန်တော် သုံးတန်းကျောင်းသား (တိမ်များကို ပုံဖော်ြ...
ဆရာတော်ဦးသုမင်္ဂလ၏ ၂၀၁၁ အတွင်း ဟောကြားခဲ့သော တရားတော...
ရှမ်းနှင့် ပဲခူးရိုးမနှစ်သွယ်ကြားမှ တစ်ခါက တိုင်ြး...
ဒီနှစ် အကယ်ဒမီ ဘယ်လိုလဲ… မျှော်လင့်ထားသလို ဖြစ်မလာ...
“ တန်ဖိုးရှိတဲ့ အရာများကိုရယူခြင်း”
ဆရာ (ဦး) အောင်သင်းစာပေဟောပြောပွဲနှင့် ကျနော့်အတွေ...
မင်းကိုနိုင်တို့ ရပ်တည်ချက်ကို ကြိုဆိုတယ်
တင်ပဏ္ဏာ နောင်အရှည်ကောင်းကြစေ ( ၃ ) - ဇာဂနာ